Dagaal Khasaaro gaystay oo u dhaxeeyay maleeshiyaad ka wada tirsan Argagixisada Al-Shabaab ayaa wuxuu ka dhacay degmada Jilib ee Gobalka Jubbada Dhexe.
Dagaalkaan ayaa inta la ogyahay waxaa ku dhintay mid ka mid ah dhagar qabayaasha Al-Shabaab, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay Maleeshiyaad badan oo kale.
Ilo lagu kalsoonyahay ayaa inoo xaqiijiyay in dagaalkaan uu ka danbeeyay kaddib markii Argagixisadu ay isku qabsadeen lacag baad ah oo laga qaadayay Gawaari Rakaab iyo Xamuul isugu jiray oo taagnaa kontoroolka degmada Jilib ee Gobalka Jubbada Dhexe.
Wararka ka imaanaya Jilib ayaa sheegaya in haatan xiisad wayn oo u dhaxaysa maleeshiyaadka ka wada tirsan Argagixisada Al-Shabaab ay ka taagantahay degmadaasi.
Maleeshiyaadka Argagixisada ah ayaa dhowr mar oo hore sidaan ugu dagaalamay degmada Jilib iyo deegaanno kale, iyagoo iska laayay Horjoogayaal iyo Dhagar qabayaal badan oo isugu jiray Soomaaliya iyo kuwa Ajaanib ah.
Bartamihii sanadkii hore ee 2018-ka ayay ahayd markii Maleeshiyaad ka kala tirsan Daacish iyo Al-Shabaab ay sidaan oo kale ugu dagaalameen Degmada Jilib, iyadoo markii danbe maleeshiyaadka qabay fikradaha takfiiriga ah ee Daacish qaarna la laayay qaarna xabsiga la dhigay.
Arrimahaan oo dhan ayaa ku soo aadaya, iyadoo ciidamada Qaranka ee sida gaarka ah u tababaran ee Soomajaystayaasha ah maalin iyo habeenba u taaganyihiin difaaca shacabka Soomaaliyeed, ayna u baabi’in lahaayeen Argagixisadaan ka been sheegaysa Diinta Islaamka.
Raisul wasaare xasan cali kheyre ayaa sheegey in mowqifka xukuumadiisu ay tahay in la dhameytiro nidaamka dowladeed ee galmudug.
Maxadaxweyne farmaajo ayaa u tacsiyeeyey geerida ku timid maxamed qanyare afrax.